Sweden oo qaabileysa Qaxootiga ka badan inta UN-ka u qoondeesay Somaliya oo ku jirta Liiska Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo qaabileysa Qaxootiga ka badan inta UN-ka u qoondeesay Somaliya oo ku jirta Liiska
Sweden oo qaabileysa Qaxootiga ka badan inta UN-ka u qoondeesay Somaliya oo ku jirta Liiska
February 18, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Iswiidhan waxay si ku-meelgaar ah u kordhin doontaa qaabilaadda qaxootiga ee nidaamka kootada ah illaa 6,400 oo qof sannadkan. Dowlada ayaa wakaaladda socdaalka u ogolaatay in ay qaabisho dadka aan awoodin in ay yimaadaan sanadkii la soo dhaafay cudurka Corona dartii.
Sarkaalka masuulka ka ah kootada qoxootiga ee waaxda socdaalka, Oscar Eckblad, ayaa sheegay in dowlada ay go’aansatay in fursado la siiyo qaxootiga aan awoodin in ay yimaadaan imaatinka cudurka ee sanadkii hore.
Ekblad ayaa carabka ku adkeeyay in tani aysan saameyn ku yeelan doonin tirada guud ee dadka loo ogolaaday inay Iswiidhan sii joogaan, maxaa yeelay qaabilaada magangalyo doonka ayaa si weyn hoos ugu dhacday mudooyinkii ugu dambeeyay. Taas macnaheedu waxa weeye in degmooyinku heli doonin wax ka badan intii ay qorsheeyeen.
Tan iyo dhibaatadii qaxootiga sanadkii 2015, Iswiidhan waxaa ka go’an kordhinta qaabilaada qoxootiga kootada oo ka koobnaa 1,900 ilaa 5,000 oo qof sanadkii. Sanadkii la soo dhaafay, waxay heshay qiyaastii 3,500 oo qof oo ka mid ah 5,000 oo qof oo la qorsheeyay, natiijada ka dhalatay Corona aafada iyo xannibaadaha safarka.
Sanadkii la soo dhaafay, Iswiidhan waxay kaalinta labaad ka gashay adduunka marka laga soo tago Mareykanka oo qaabilay qoxooti UN. Caadi ahaan Kanada, Noorway iyo Boqortooyada Ingiriiska ayaa ugu sarreeya liiska dalalka qaabilaya.
Saamiga qaxootiga ee Sweden sanadkan waxaa kamid noqon doona Siiriyaanka jooga Jordan, Lubnaan, Turkiga ama Waqooyiga Afrika, marka lagu daro dadka ka imanaya Koonfurta Suudaan, Suudaan, Soomaaliya, Koongo iyo Ereteriya. Sida ay tabisay